अस्पताल सफा राख्न डाक्टर केसीलाई बचाऊ - TGuff | TGuff
अस्पताल सफा राख्न डाक्टर केसीलाई बचाऊ
राजनीतिको फोहोरलाई अस्पतालबाट अलग पार्ने अभियान छेडेका डाक्टर गोविन्द केसी यतिबेला मृत्यु सैय्यामा छटपटाइरहेका छन्। बन्दूकको पृष्ठभूमिबाट बनेको बाबुराम भट्टराई सरकारसँग डाक्टर केसीको नैतिक युद्ध कुन विन्दुमा टुंगिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो निश्चित हो कि सन्त डाक्टरले सुरु गरेको ‘अस्पतालबाट फोहोर फ्याँक्ने’ अभियानले लाखौँ सर्वसाधारणको समर्थन पाउँदै गएको छ।
सरकार यिनको माग सुन्नु पर्ला भनेर कान थुनेर भागिरहँदा केसीको अभियानमा हरेक घण्टा समर्थक बढ्दै गएका छन्। सोसल मिडियामा प्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध हजारौं स्ट्याटस केही घण्टामै अपडेट भएका छन्। ‘यत्रो चर्चा भइरहँदा केसीको स्वास्थ्यप्रति प्रधानमन्त्रीले किन यसरी बेवास्ता गरेको ?’ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका निजी सचिव विश्वदीप पाण्डेलाई प्रश्न गरेको थिएँ। ‘प्रधानमन्त्री केसीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ, शिक्षामन्त्रीमार्फत् उहाँले सहमति जुटाउन पहल गरिरहनु भएको छ। छिटै सहमति बन्छ होला’ दिउँसो उनले भने।
के हो डाक्टर केसीको माग ?
डाक्टर केसीले उठाइरहेको माग त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको राजनीतिक भागबण्डाले वरिष्ठता मिचेको विरुद्ध हो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले मिलेर बरिष्ठता क्रमलाई मिचेर भाँडभैलो मच्चाउन थालेपछि डाक्टर केसीले अनसन सुरु गरेका हुन् । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रकाश सायमीलाई डिन नियुक्त गरेर सहमटि जुटाउँदै केसीको आमरण अनसन तोड्ने प्रयास गरेका थिए । चिकित्सक संघ सहितका पक्षहरुबीच भएको वार्ता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकूलपति हिराबहादुर महर्जनलाई हजम भएनछ । एमाले कोटोमा टियुको उपकूलपति बनेका महर्जन तिनै व्यक्ति हुन् जसले वरिष्ठता क्रम मिचेर टिचिङ अस्पतालमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा डाक्टर धर्मकान्त बाँसकोटालाई नियुक्त गरेका थिए । डाक्टर केसी त्यही फोहोरी खेलविरुद्ध नैतिक युद्धमा उत्रिएका हुन् । महर्जनले आफूले गरेको नियुक्तिलाई जुँगाको लडाइको रुपमा लिँदा डाक्टर केसीको जीवन अझ मृत्यु नजिक पुगेको छ । ‘संस्था बचाउन आमरण अनसन सुरु गरेको हुँ’ केसीले भनेका छन्–‘माग पूरा नभइ अनसन तोड्दिनँ ।’ यसअघि असारमा केसीले पहिलो पटक आमरण अनसन बस्दा सरकारले वरिष्ठता आधारमा डाक्टर कुमुद काफ्लेलाई डिन नियुक्त गरेको थियो । उमेर हदका कारण उनले डेढ महिना नबित्दै अवकास पाए । डाक्टर केसीले सोमबार आमरण अनुसन सुरु गरेको भोलिपल्ट जबरजस्ती बाँसकोटा डिन बनाइएका थिए ।
स्वास्थ्य बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरु यो विषयलाई मेडिकल कलेजको कमिशनसँग लगेर जोड्छन् । ठूलो रकमको चलखेल गर्ने गिरोहले डिन नियुक्तिमा पकड जमाएपछि वरिष्ठताक्रम सधैँ मिचिने खतरा बढ्दै गयो । केसीको गम्भीर चिन्ता त्यसमै हो ।
डाक्टर गोविन्द केसीलाई बचाऊ
६ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई बचाउन नेपाल चिकित्सक संघले अभियान थाल्ने निर्णय गरेको छ। लातको भूत बातले मान्दैन भन्थे अब संघले शनिबार र आइतबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेपछि सरकार तात्तछ कि ! डाक्टर केसी मृत्युको मुखमा पुग्दा पनि सरकारले उनका मागप्रति चासो नदेखाएको भन्दै संघले सेवा बन्दको आह्वान गर्नु परेको जनाएको छ। डाक्टर केसी बचाऊ अभियानले शनिबार ९ बजे टिचिङ अस्पतालमा भेला हुन सर्वसाधारणलाइ अपिल समेत गरेको छ।
को हुन् केसी ? भिडियो हेर्नुहोस्
विजयकुमारले लिएको अन्तरवार्ता
Dr. Govinda Kc, Teaching Hospital, डा. गोविन्द केसी
हाम्री राम्री, चीनकीलाई क्राउन (Video & Photo)